मलाई सामाजिक मिडियामा कसरी रुचि छ? | Martech Zone
शनिबार, अगस्ट 18, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब शेलले मान्छेहरूको लागि सोधे जो एक साथ केही प्रतिक्रिया प्रदान गर्न रुचि हुन सक्छ सामाजिक मिडिया मा SAP सर्वेक्षण, म अवसरमा उफ्रिनुभयो र तुरुन्त उसलाई लेखें। शेलको अनुमतिले, उनले मलाई मेरो ब्लगमा मेरो प्रतिक्रियाहरू पोष्ट गर्न अनुमति दिए। यो भाग I हो!
मलाई बताउनुहोस् कि कहिले र कसरी तपाइँ पहिलो पटक मिडियामा रुचि प्राप्त गर्नुभयो। किन?
एक दशक भन्दा धेरै समयसम्म प्रिन्ट मिडियामा कार्य गर्दै मैले हेर्दा इन्टरनेटले द्रुत रूपमा ध्यान दिन थाले र यसैसँगै अखबार उद्योगको विज्ञापन भयो। माध्यमको रूपमा इन्टरनेट पहुँचयोग्य, सस्तो, र प्रविधि पर्याप्त सरल छ। प्रिन्ट मिडिया भित्र पनि, म सँधै विश्वास गर्दछु कि प्रत्येक माध्यमको आफ्नै बल र कमजोरीहरू हुन्छन्। कहिलेकाँहि अखबार थिएन विज्ञापन गर्न सबैभन्दा ठूलो ठाउँ।
जब इन्टरनेटको साथ आयो, मेरो साथीहरूले यसलाई एक जोखिमको रूपमा देखे। मैले यसलाई अविश्वसनीय अवसरको रूपमा देखे। म जहाज उफ्रियो र कोलोराडोको डेन्भरमा इन्टर्नेटको उपयोगमा नेतृत्व लिने कम्पनीमा काम गर्न सारियो। दुर्भाग्यवश, बबल फुस्दा म सामेल भएँ। म स्थानीय अखबारमा सामेल हुन र तिनीहरूको सीधा विपणन प्रयासहरूको नेतृत्व गर्न इन्डियानापोलिसमा स moved्यो, सम्भावित ग्राहकहरूलाई राम्रो लक्षित गर्न डाटाको उपयोग गरेर र ग्राहकहरूको लागि सीधा मेल प्रोग्राम बनाउँदै।
मैले सम्भव भएसम्म अखबारमा ईमेल मार्केटिंग जस्ता प्रविधिहरू प्राप्त गर्न सक्दो कोसिस गरें, तर केहि "इन्टरनेट" लाई सामग्री वितरित गर्न र विज्ञापन बेच्ने माध्यमको रूपमा देखियो ... सम्बन्ध सिर्जना नगरी। कुनै पनि इन्टरनेट आईटी विभागको अधिकार अन्तर्गत थियो त्यसैले म अन्य व्यक्तिको औंलाहरूमा पाइला टेकेको थिएँ। जब नयाँ व्यवस्थापन आयो र सोध्न थाल्यो, "तपाईं के गर्नुहुन्छ यो?", मलाई थाहा थियो कि तिनीहरू भुलक्कड थिए र मलाई छोड्नु पर्छ।
एक मित्र र सहकर्मी, डेरिन ग्रेको माध्यमबाट मैले प्याट कोयललाई भेटें र उनीहरूको फर्ममा सामेल भएँ, ब्राण्डडाइरेक्ट। डारिन बिक्री र नेटवर्कि at मा मास्टर थियो र थियो। प्याट सम्बन्ध बनाउने मास्टर थियो र हो। म डाटा र टेक्नोलोजी मान्छे हुँ - आफ्ना सम्भाव्यता र ग्राहकहरूसँग कम्पनीहरूको सम्बन्ध बढाउनको लागि उत्तम प्रविधिहरू फेला पार्दै। यो सफलता थियो, डेरिन बेचियो, प्याट निर्देशित, र मैले निर्माण गरें!
यस अवधिमा प्याट र मैले सोशल मीडियामा परेको असरहरू देख्न थाल्यौं। धेरै विडंबनापूर्ण पनि छैन, हामी सेलको पुस्तक पढ्छौं (खाइन्छ), नग्न कुराकानीहरू। हामीले बुझ्यौं कि मार्केटिंग अब केवल 'पुश' टेक्नोलोजी थिएन, यो केहिमा परिवर्तन हुँदैछ, एकदम भिन्न।
प्याट पूर्ण समय इन्डियानापोलिस कोल्टमा सरे। जिम इरसेको नेतृत्वमा कोल्टहरू जान्दछन् कि उनीहरू महानताको कगारमा छन् र म विश्वास गर्दछु कि उनीसँग प्रशंसकहरूसँग सम्पर्कको अवसर लिनुपर्दछ भन्ने कुरा जान्नको लागि उसको दर्शन थियो जबकि सुपरबोलमा उसको धक्का देखियो।
म सारियो सटीक लक्ष्य, एक ईमेल सेवा प्रदायक, CMO र संस्थापकको प्रचारक द्वारा मंत्रमुग्ध क्रिस बगगट। क्रिस सन्देश अनुमति-आधारित ईमेल मार्केटिंगको अविश्वसनीय मूल्यको बारेमा थियो, सही सन्देश सही व्यक्तिलाई सही समयमा लक्षित गर्दै।
पछिल्ला दुई बर्षमा, प्याट र म अझै घनिष्ट मित्र बनेका थियौं र अक्सर उहाँ एक निर्देशक स्थानीय पुस्तक क्लब, इन्डियानापोलिस बुक म्यासअप संग भेट्नुहुन्थ्यो। हाम्रो पहिलो पुस्तक? नग्न कुराकानीहरू अवश्य!
प्याटले कोल्टहरूलाई धपाउने अवसरलाई सुपरोब्बल च्याम्पियन्सको लागि एक सामाजिक नेटवर्क निर्माणको लागि लिए। मैले मेरो कोल्ट्सनेटलाई वास्तविकतामा परिणत भएको देख्दा मुक्ति पाए। मेरो आफ्नै व्यस्त तालिकाको साथ, एक्सेक्टरेटको लागि डेभलपर समुदाय शुरू गर्दै र एक्जिकट्रेटको लागि उत्पाद व्यवस्थापकको पदोन्नति हुँदा हामी सयौं एकीकृत ग्राहकहरूबाट हजारौंमा बढ्यौं, म केवल कोलक्ष्सनेट सुरू भएको बेलामा मात्र हेर्न सक्थें।
क्रिस बगगट र म पनि मिडियाको बारेमा भेट्ने र कुरा गर्न थालें। क्रिसले माध्यमको मूल्य बुझ्यो, जुन (म विश्वास गर्दछु) उद्योगको अगाडि एक्सेक्टरेट प्रक्षेपण गर्न धेरै हदसम्म प्रभावकारी थियो। क्रिस ' ईमेल उत्तम अभ्यास ब्लग धेरै बर्षमा धेरै पटक सम्मानित गरियो र उहाँ निश्चित रूपमा ईमेल मार्केटिंग उद्योगमा एक विचार नेताको रूपमा चिनिनुभयो - अंश आफ्नो ब्लगको लागि धन्यवाद। यो तब हो जब क्रिसले एउटा अवसर देख्न शुरू गरे। ब्लगहरू जानकारीका लागि शानदार सवारी साधनहरू थिए - तर अझै उपभोक्ताहरूको लागि ब्लगर्सले पोष्ट गरिरहेका सुनको नगेट फेला पार्न सजिलो छैन।
क्रिसले यसको लागि बीउ रोप्ने काम सुरु गर्यो कम्पेन्डियम सफ्टवेयर, आफ्नो नयाँ स्टार्टअप। यस कम्पनीमा नजर राख्नुहोस्! यो ब्लगि theको अर्को विकास हो र यो अब वास्तविकतामा परिणत भएको छ। कहिलेकाँही मलाई बुबाले आफ्नो बच्चा हुर्किरहेको देख्दछु जस्तो लाग्छ मैले यस कम्पनीको सुरु देखेको छु - तर दुर्भाग्यवस, मेरो साथ टोलीमा सामेल हुनको लागि समय थिएन।
म किन सामाजिक मिडियामा फसेको छु?
सामाजिक मिडिया खेल मैदान को स्तर। मलाई लाग्छ कि यो व्यवसायको लागि जत्तिकै महत्वपूर्ण छ जति यो प्रजातन्त्रको लागि हो। सामाजिक मिडियाले कसैलाई किबोर्ड र इन्टरनेट पहुँच प्रदान गर्दछ भ्वाईस पाउनका लागि। सामाजिक मिडिया राम्रो, ईमानदार व्यवसाय को लागी उनीहरुको सम्भावना र ग्राहकहरु संग सम्बन्ध बनाउन को एक साधन प्रदान गर्दछ। अब यो छैन 'जसले सर्वाधिक विज्ञापन खर्च गर्न सक्दछ' ऊ जित्छ। अब व्यवसायले प्रिन्ट गर्न र प्रसारण मिडिया फेला पार्नको लागि उनीहरूको बजेटको ठूलो प्रतिशत तिर्नु पर्दैन। अब तिनीहरू केवल एक महान काम गर्नु पर्छ र शब्द बाहिर आउनेछ।
कुन मार्केटर यसमा संलग्न हुन चाहँदैन?
एक पक्ष नोट: वर्ष पछि, इन्डियानापोलिस स्टारले पनि प्रकाश देख्न शुरू गर्यो। एक पटक सम्पादकीय स्टाफ द्वारा गिल्ला गरेपछि, अब प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री अखबारको लागि अग्रणी विकास क्षेत्र बनिरहेको छ। चेक आउट गर्नुहोस् IndyMoms एक महान उदाहरण को रूप मा।
टैग: douglas karrprectargetइन्डियानापोलिस कल्टहरूनग्न कुराकानीशेल इजरायलसामाजिक संजाल
डग डेटि Front फ्रन्टमा खराब समाचार ...
अगस्ट 18, 2007 बेलुका 9:27 बजे
महान लेख, डग। म पनि छापा संसारबाट आएको हुँ। मैले CompuWriter Jr मा टाइपसेट गर्न सिक्दै मेरो दाँत काटें। त्यो चीजको फन्ट छापिएको लामो फिल्म स्ट्रिप थियो जुन मेसिन भित्रको पाङ्ग्रामा घुमेको थियो। एक पटक एक पत्र टाइप गरिसकेपछि, तपाईं पछाडि गएर सुधार गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंले लाइन पुन: टाइप गर्नुपर्‍यो र गल्तीमा हात पट्टी लगाउनुपर्‍यो!
टेक्नोलोजीको साथमा आउँदा सम्पूर्ण मेकानिकल प्रक्रियालाई "स्वत: जादुई" बनाइदिएपछि म छक्क परें। कम्प्यूटर र प्रिन्टरको साथ, संसार अनन्त सम्भावनाहरूको लागि खोलिएको थियो, पृष्ठ छाप्नु अघि टाइप-ओ सुधार गर्ने सहित (कल्पना गर्नुहोस्)।
त्यसपछि इन्टरनेट आयो र मानिसहरूले एकअर्कासँग कुराकानी गर्न थाले जस्तो पहिले कहिल्यै थिएन। म संसारमा प्रतिभा र बौद्धिकता को गहिराई र चौडाई देखि लगातार चकित छु। पक्कै पनि त्यहाँ क्र्याकपोटहरू छन्, तर म कुराकानीमा सामेल हुने उनीहरूको अधिकारको रक्षा गर्छु। साँचो क्रान्तिको समयमा बाँच्न पाउनु रोमाञ्चक छ।
अगस्ट 18, 2007 बेलुका 9:51 बजे
धेरै राम्रो! मलाई थाहा थिएन कि तपाईं छापबाट पनि आउनुभयो! मसँग बिजुली/इलेक्ट्रोनिक्स पृष्ठभूमि थियो र व्यापारको पृष्ठांकन पक्षमा अलिकति काम गरें त्यसैले मलाई थाहा छ तपाईं कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले काट्ने र टाँस्ने पृष्ठ निर्माणहरूबाट पृष्ठांकन र स्वचालन सुरु गर्दा म त्यहाँ थिएँ!
तपाइँको एक मनमोहक उद्योग हो जुन टेक्नोलोजी को लागी प्राइम हो। मलाई लाग्छ कि आला रिटेल खुद्राको भविष्य हो र, आज बलियो भए पनि, मलाई लाग्दैन कि "सुपर स्टोर" अर्को दशक टिक्नेछ (कम्तिमा मलाई आशा छैन)।
जसरी तपाईहरुले प्रविधिको फाइदा उठाउँदै हुनुहुन्छ जंगली चराहरू असीमित शानदार छ। तपाईंका फ्रान्चाइजीहरू तपाईंसँग भाग्यशाली व्यक्तिहरू हुन्!
अगस्ट 19, 2007 मा 4: 38 AM
सामाजिक सञ्जालमा धेरै चाखलाग्दो पोस्ट!. म Sun Microsystems बाट हुँ र मेरो CEO ले पनि सोसल मिडियाको यो दर्शनलाई प्रोत्साहन गर्छ। मैले क्रिस एन्डरसनको लामो पुच्छरको बारेमा लेखेँ
अगस्ट 19, 2007 मा 7: 42 AM
जब म सेमिनार गर्छु कर्पोरेट ब्लगि र कर्पोरेसनहरू जसले 'यो सही गर्छ', मैले उल्लेख गरेको पहिलो कम्पनी हो सन र जोनाथन श्वार्ट्ज!
मैले विगतमा तपाईको ब्लग पढेको छु! तपाईंले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ र कसरी टेक्नोलोजीको विकास र हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैछ भन्ने बारे रोचक परिप्रेक्ष्य छ।
अगस्ट 19, 2007 बेलुका 10:42 बजे
शेल को हो वा के हो?
अगस्ट 20, 2007 मा 7: 35 AM
शेल शेल इजरायल हो, नग्न वार्तालापका लेखक - एउटा पुस्तक म अत्यधिक सिफारिस गर्छु। शेलसँग उत्कृष्ट छ ब्लग जसले सामाजिक सञ्जालमा अन्वेषण र छलफल जारी राख्छ।
र उहाँ साँच्चै राम्रो केटा हुनुहुन्छ! उहाँ अविश्वसनीय रूपमा पारदर्शी, खुला, इमानदार र आफ्नो साइट मार्फत उपलब्ध हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि उहाँ पहिलो लेखकहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जसले वास्तवमै आफ्नो शिल्पलाई ब्लगस्फियर प्रयोग गरेर काम गर्न लगाउनुहुन्छ!
28 डिसेम्बर, 2007 बेलुका 9:34 बजे
सोशल मिडिया साइटहरू विज्ञापनको नयाँ र आउँदै गरेको तरिका हो, मलाई विश्वास छ। यो मेरो लागि अचम्मको छ कि कसरी इन्टरनेट वर्षौंमा विकसित भएको छ र म भविष्यमा के आउँदैछ भनेर सोच्दछु। कुनै पनि नेटवर्क मार्केटर जसले सोशल मिडिया साइटहरू प्रयोग गर्दैनन् व्यापार वृद्धिको लागि ठूलो अवसर गुमाउँदै छन्।
कोलोराडो मा Meredith
जुलाई,, २०१ at 2::2015। बिहान
त्यसोभए तपाईले भन्नुभएको छ कि ग्राहक अन्तरक्रिया नै मुख्य कारण सोशल मिडिया यति महत्त्वपूर्ण छ? के तपाईंलाई लाग्छ कि ब्लगहरूसँग समान अवसर छ वा तिनीहरूले लेखकलाई दर्शकहरू भन्दा उच्च विमानमा सेट गर्छन्?
एक ब्लगमा मूल्य प्रदान गर्ने र अधिकार निर्माण गर्ने क्षमता... त्यसपछि यसलाई साझेदारी गर्नुहोस् र सोशल मिडिया मार्फत प्रचार गर्नुहोस् एक उत्कृष्ट संयोजन हो। सामाजिक सञ्जाल द्वि-दिशात्मक छ, जसले तपाईंलाई दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्न वा तपाईंको आफ्नै समुदाय निर्माण गर्न सक्षम बनाउँछ। म पक्का छैन कि अर्को बिना शक्तिशाली हुनेछ।